သောသီခို: ဗမာ့တပ်မတော်လက်ချက် ကချင်ရွာသားများ လက်နက်ကြီးထိမှန် (DVB ရုပ်သံ)
ဗမာ့တပ်မတော်လက်ချက် ကချင်ရွာသားများ လက်နက်ကြီးထိမှန် (DVB ရုပ်သံ)
Posted by PKD at 8:53 AM
တောက်.....နိုင်ငံတစ်ကာ ဘာလုပ်နေလဲ????ခင်ဗျားတို့ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့နိုင်ငံတစ်ကာစစ်ဥပဒေဆိုတာဘာလဲ..အလားကားကြားကောင်းအောင်ထုတ်ထားတာလား..မြန်မာနိုင်ငံအတွက်မပါဘူးလား..ဒီမှာ လူက မမွေးတဲ့သားတွေက လူကမွေးတဲ့သားတွေကို ခင်ဗျားတို့ ထုတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတစ်ကာစစ်ဥပဒေကို
ချိုးဖောက်ပြီး ပြည်တွင်းစစ်မှာ ဒီလောက်မီဒီယာတွေကအလျှင်မှီအောင်သတင်းထုတ်ပြန်နေနိုင်တဲ့ ၂၁ ရာစု
ခေတ်မှာတောင် တိုက်လေယဉ်တွေကိုသုံးပြီး အနိုင်ကျင့်နေကြပြီ..ဒါ ဘယ်သူ့ ကိုမှစောက်ရေးမစိုက်တာ....ခင်ဗျားတို့ ဘာ လုပ်နေလဲ???အန်တီ
စု...ကောဘာတွေလုပ်နေလဲ...တစ်ခွန်းမှမပြောတော့ဘူးလား...ခင်ဗျားပြောပြေပြောနေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးတို့ ..အပြောင်းအလဲတို့ ..နိုင်ငံတစ်ကကမြန်မာပြည်ကိုအကူအညီပေးပါ သိန်းစိန်အစိုးရကို ကျမလက်ခံတယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုတာ..အခုဖြစ်ပြက်နေတာတွေကိုပြောတာ
လား??????'ဒါ သက်သက်တိုင်းရင်းသားအရေးကိုတစ်ရားဝင် ပေါ်တင်ကြီး
မျက် ကွယ်ပြုတာ....UNFC တိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်အဖွဲ့ တွေဘာလုပ်နေလဲ.....ခင်ဗျားတို့ ကိုယ့်ကိုမထိသေးလို့ ဆိုပြီး..မသိလိုက်ဘာသာနေ နေကြတာလား...ဒါဒီလူတွေ သုံးနေကြာဗျူဟာဘဲ...တစ်ဖွဲ့ ကို အပြင်းအထန်စစ်မျက်နှာဖွင့်ဖို့အခြားအဖွဲ့တွေ ကိုခဏတာချွေးသိပ်ထားတာဘဲ..ခင်ဗျားတို့ဆီလဲတစ်ခါကရောက်ခဲ့ပြီးသလို နောက်တစ်ခါလဲ အချိန်မရေး ဆက်ရောက်လာနိုငိတယ်ဆိုတာ အမြဲသတိပြုပါ..ခင်ဗျုားတို့ ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ အစိုးရကိုကေအိုင်အေ ထိုးစစ်ဖိ်ု့ စာကို အစိုးရက ခင်ဗျားတို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့ ရက်အတိုင်းလိုက်နာရပ်ဆိုင်းဘိ်ု့ မပြောနဲ့ ဖတတ်တောက်မဖတ်ဘူး..ဒါခင်ဗျားတို့ ကို ရှိတယ်လို့ တောင်သဘောမထားတာ..ကေအန်ယူ ဘာလုပ်နေလဲ....ယူအန်အက်ဖ်စီင်္မှာ
ဥကဠ နေရြာ့ကီးလဲယူခဲ့တဲ့ ခင်ဗျားတို့ ရဲ့သမိုင်းနဲ့နှစ်၆၀ ကျော်ကြာအသက်သွေးပေးခဲ့တဲ့ ရဲဘော်ရဲ့ဘက်တွေရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုအစွန်းထင်းခံမှာလား..ဥကဠဖူးမူတူးနှင့် စစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ဂျော်နီ..ခင်ဗျားတို့ လည်းစစ်သားတွေဘဲ အကူအညီမရှိဘဲ အထီးကျန်း အနိုင်ကျင့်ခံရရင် လယ်လိုခံစားရမည်လည်းဆိုတာကိုယ်ခြင်းစာတတ်ပါ...သူတို့ ၁၇ နှစ်လောက်နပ်နေတုန်းက တို့ တွေလက်ပစ်ကူးနေခဲ့ရတာ..အခု တို့ တွေနပ်
နေရမဲ့အလှည့်ဘဲလို့ တော့မထင်ပါနှင့်ခေတ်တွေကပြောက်းကုန်ပြီ...အခုအဖြစ်အပြက်ဟာ ကချင်တစ်ခုတည်းနှင့်မဆိုင်ဘူး တိုင်းရင်းသားတိုင်း
နှင့်ဆိုင်တယ်..ကချင်တွေ ငြိမ်းချမ်းရေးမရနိုင်ဘဲနှင့်ခင်ဗျားတို့ စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်း
ချမ်းရေးကိုဘယ်တော့မှမရနိုင်ဘူး အတွေးအခေါ်တွေကို ကြီူးဖြည်ပစ်ကြပါ..
ကြိုးတိုတိုနှင့်မချည်နှောင်ထားကြပါနဲ့ ....ဒီအချိန်ဟာ ..ခင်ဗျားတို့ က တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့စည်းလုံးမှုကို လက်တွေ့ ကျကျပြဖို့ အချိန်ကောင်းဘဲ...